Faa'idooyinka Lagu Baahan Yahay Waxyaabaha Lagu Xasuubiyay Sida Loo Yaqaano Khabiirka Kala Duwan
ama blog. Google, Bing, iyo Yahoo waxay ku tiirsan yihiin boodbood s iyo shabakadaha webka si ay u kala dhigtaan bogag kala duwan. Qalabkani wuxuu ka caawiyaa kobcinta ganacsiyada waxayna ku habboon yihiin labada barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Shirkadaha yaryar iyo kuwo waawaynba waxay si joogto ah u xoqaan oo u kaydiyaan macluumaadka gaarka ah - umzugsgut schweiz zoll. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee farsamadan waxaa lagu sharaxay hoos:
1. Ku haboon ganacsiyada:
Yelp, TripAdvisor, Zomato, Better Business Bureau, Amazon, Google, Trustpilot, iyo shirkado kale waxay isticmaalaan nadiifin maqaallo joogto ah. Waxay ku tiirsan yihiin goosashooyinka shabakada ee kala duwan sababtoo ah sharciyadooda iyo saxsanaanta. Noocyo kala duwan ayaa u jeeda goobaha warbaahinta bulshada si kor loogu qaado badeecadahooda iyo adeegyadooda. Haddii aad soo saarto sharaxaadda alaabta iyo sawirrada goobaha e-commerce iyo shabakadaha warbaahinta bulshada, waxaad heli doontaa fursado wanaagsan si ay u koraan ganacsigaaga. Webmasters iyo barnaamijyadeyaal waxay sidoo kale xoqayaan profiles LinkedIn iyo keydinta macluumaadka isticmaalka offline.
2. Adeegyada iyo alaabooyin kala duwan:
Maalmahan, qof kastaa wuxuu jecel yahay alaabta iyo adeegyada alibaba, eBay, iyo Amazon. Sida webmaster ahaan, waxaad ku dari kartaa wicitaano kala duwan oo aad ku heli karto macluumaad faa'iido leh adiga nafsadaada. Marka maadada la xoqay, waxaad si sahlan u eegi kartaa faahfaahinta alaabta, macluumaadka qiimaha, iyo sawirrada. Waxay ka caawisaa hagaajinta tayada alaabtaada iyo adeegyadiinna. Haddii aad adeegsanayso hay'ad gaar ah oo aad rabto inaad bartilmaameedsato tiro badan oo macaamiisha ah, waa inaad xoqdaa waxyaabaha ka jira goobo kala duwan oo isbarbardhigaan macluumaadka qiimaha baabuurta. Tusaale ahaan, Uber iyo Careem waxay ku xiran yihiin waxyaabaha la soo saaray si kor loogu qaado ganacsigooda. Waxay bixiyaan faahfaahin ku saabsan darawalkooda, baabuurta iyo macluumaadka qiimaha. Shirkadahaasi waxay u muuqdaan inay daboolayaan filashadayada iyaga oo bixiya adeegyo la isku halayn karo.
3. Ardayda, culimada, aqoonyahanka, dhakhaatiirta iyo cilmi-baarayaasha waxay u baahan yihiin in la gooyo sheeyada si loo helo shaqadooda. Waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan mawduucyo gaar ah kumanaan internetka ah. Malaayiin maqaayad ah ayaa la daabacaa maalin kasta, waxayna ka caawiyaan ballaarinta baaxadda cilmi-baarista. Waxaad si fudud u nadiifin kartaa raadintaada isla markaana badbaadin kartaa wakhti iyo lacag markaad fulinayso hawlahaaga.
4. Qorshe maaliyadeed oo haboon:
Mawduuc ayaa loo xoqay qorshaynta maaliyadeed ee saxda ah. Waxaad soo saari kartaa xogta ku saabsan sarrifka saamiyada, hantida maalgashiga, isbeddellada hadda, iyo rajooyinka ganacsiga. Soo dejinta. io iyo Octoparse caawinta ururinta macluumaadka waxtar leh ee laga helo internetka oo soo gooyso sida shuruudahaaga.
5. Iibsashada iyo ijaarashada:
Haddii aad rabto inaad wax iibsato ama ijaarato, waxaad u baahan tahay inaad xoqdo nuxurka oo aad fahamto faa'iidooyinka iyo khasaaraha ee hay'adda guryaha. Waxaad si sahlan u abuuri kartaa xog ururinta, diyaarinta liiska wakiilada, oo ururin faahfaahin ku saabsan hanti gaar ah. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad wax iibiso, waa inaad soo uruurisaa iyo xogta xoqida dhismayaasha iyo magaalooyinka.
A Qalabka burburinta wuxuu ka dhigayaa xog faa'iido leh oo laga helo bogagyo kala duwan, wuxuu hagaajiyaa hingaadka iyo qaladaadka naxwe ahaaneed, wuxuuna fuliyaa hawlo kala duwan. Webmasters iyo barnaamijyadeydu waxay muujiyaan akhrista RSS, iyo Twitter waxay ku bixiyaan boggooda internetka. Waa hab fiican oo lagu galo akhristayaal badan, laakiin soo bandhigida macluumaad aad u badan ayaa dhaawici kara darajooyinkaaga bogga. Sidaa darteed, waa inaad muujisaa wax faa'iido leh oo sax ah kaliya.